Samee quful elektiroonig ah oo aad ku furan kartid albaabka garaashka adiga oo ku mahadinaya farahaaga | Qalabka bilaashka ah
Samee quful elektiroonig ah oo aad ku furi karto albaabka garaashka farahaaga awgiis
Waxaan ku jirnaa waqti ay umuuqato in waxa ugu aaminka badan ama ugu dhaqsaha badan ay tahay inaad isticmaasho farahaaga tusaale ahaan, furitaanka taleefankaaga gacanta iyo xitaa inaad shaqo tagto, xaaladdan oo kale wax waliba waxay marayaan amniga loo baahan yahay ama lagu soo rogay si loo fuliyo mashruuc kale.
Ka fog tan, runtu waxay tahay, mashruuc ahaan barashada sida noocan ah aaladda casriga ahi u shaqeyso ay ka sii xiiso badnaan karto, tan darteed maanta ayaan rabaa inaan kuu sharxo sida loogu xiro qufulka elektarooniga ah albaabka garaashkaaga ee lagu furi karo adiga oo isticmaalaya farahaaga.
1 U samee qufulka elektarooniga ah albaabka garaashka talaabo talaabo talaabo ah oo aad ku furan karto farahaaga
2 Talaabooyinka lagama maarmaanka u ah dhisida akhristaha farahaaga ee aad ku furi karto albaabka garaashkaaga
2.1 Tallaabada 1: Fiilooyinka iyo Kala-bixinta Nidaamka oo Dhan
2.2 Tallaabada 2: Koodh siinta iyo ku shaqeynta kontoroolayaasha
2.3 Tallaabada 3: Waxaan soo ururinaynaa mashruuca oo dhan
2.4 Tallaabada 4. Adeegsiga nidaamka
U samee qufulka elektarooniga ah albaabka garaashka talaabo talaabo talaabo ah oo aad ku furan karto farahaaga
Anoo ku sii faahfaahinaya wax yar oo faahfaahsan, waxaan kuu sheegayaa in mashruucan aan u adeegsan doonno a sawirka sawirka faraha sida SparkFun GT-511C1R. Sidii caadiga ahayd casharradan oo kale, waa in maanka lagu hayaa in asal ahaan dhammaan noocyada alaabtan ay leeyihiin hawlgal aad u eg, sidaa darteed looma baahna inay si sax ah u noqoto qaabkan.
Haddii aad ku dhiirrato inaad fuliso mashruucan laakiin aad leedahay kala duwanaansho gaar ah, sida in sawirka sawirka faraha la isticmaalay uu ka duwan yahay kan casharrada ama albaabka garaashkaaga uu si fudud u adeegsanayo nidaamyo kale, wax dhici doona ku dhowaad wadar ahaan suurtagalnimada, maya waa inaad maxaad u cabsaneysaa, waad raaci kartaa casharrada laakiin maaha sida ay tahay tan iyo markii ay ahayd waa inaad sameysid qaab kale labadaba fiilooyinka iyo koodhka laftiisa si loogu waafajiyo qalabkaaga.
Talaabooyinka lagama maarmaanka u ah dhisida akhristaha farahaaga ee aad ku furi karto albaabka garaashkaaga
Tallaabada 1: Fiilooyinka iyo Kala-bixinta Nidaamka oo Dhan
Si aad u furto albaabka garaashkaaga mahadnaqa farahaaga fartaada, waxaad u baahan doontaa laba qaybood oo kala duwan. Dhinac, waxaan u baahanahay soo saar guddi kontarool ah oo aan annagu rakibi doonno gurigayaga dibaddiisa. Gudaha guddi koontaroolku wuxuu noqon doonaa meesha aan ku rakibeyno qalabka sawirka faraha, shaashad yar oo macluumaad ah iyo badhanno dheeri ah.
Second waxaan u baahan doonaa ku rakib sanduuq labaad garaashka laftiisa. Tani waxay mas'uul ka noqon doontaa xaqiijinta in faraha la galiyay qaybta koontaroolka ay aqbasho ama uusan aqbalin nidaamka iyo, haddii ay dhacdo xaqiijin sax ah, sii wado sameynta calaamadda lagu garan karo mootada oo fureysa albaabka garaashkeena.
Si tan loo fuliyo waxaan u baahan doonnaa microMormeelaha ATMega328p kaas oo mas'uul ka noqon doona nooleynta guddiga xakamaynta oo aan ku rakibeyno meel ka baxsan gurigeenna halka, guddiga gudaha waxaan ku sharxi doonnaa ATTiny. Labada guddi waxay ku wada xiriiri doonaan xiriir taxane ah. Si loo kordhiyo amniga nidaamka oo dhan, waxaan rakibi doonnaa gudbiye jajaban si markaa kaarka ATTiny-ka uu u xiro isku xirka, si haddii qashin u bilaabo qeybta kontoroolka banaanka, ma furi karaan albaabka garaashkeena iyadoo laga gudbayo dhowr fiilooyin.
Haddii mashruucani ku qanciyo oo aad xiiseyneyso inaad fuliso mashruucan, kani waa liiska qaybaha aad u baahan doonto:
GT-511C1R Sawirka Sawirka
Isku xidhka JST ee scan-faraha faraha GT-511C1R
Jaangooyaha danab MCP1700-3V3
10 uF capacitor (2 unug)
10 kOhm iska caabin (3 cutub)
100 ohm resistor (3 cutub)
Pushbutton (3 cutub)
28 iyo 8 isku xirayaasha IC, waxay gacan ka geysan doonaan ilaalinta microcontrollers markay wax iibinayaan waana wax aad u fudud barnaamijka
Terminallada si loogu xiro fiilooyinka koontaroolka sanduuqa hoose iyadoon la iibin
Sanduuqa biyuhu u galaan ee dibadda
AC ilaa DC beddelka, tusaale ahaan xeedho taleefan ayaa la isticmaali karaa
Waqtigan xaadirka ah waa waqtigii lagu xiri lahaa dhammaan qalabka ku jira liiska. Fikradda, sidaad hubaal u maleynaysid, ayaa maraysa raac jaantuska ku yaal meel ka koreysa khadadkaas, isla taas oo aad ka arki karto qaabka labadaba guddiga xakamaynta iyo qaybta gudaha. Hal talo oo aan ku siin karo ayaa ah inaad siiso fiilooyinka labada baddelaha hadda jira iyo LCD dherer cayiman si aad u laalaato oo aad ugu hagaajiso meesha ugu saxsan ee aad ku dhex sameysid sanduuqa biyuhu diidayaan.
Haddii waqtigan aan baarno daqiiqad koodhka koontaroolaha uu ugu dambeyntii fulin doono, waxaad ogaan doontaa in badhamadu ay ku xiran yihiin biinanka 12, 13 iyo 14, kuwaas oo fuliya howlaha 'déba','OK'iyo'hoossiday u kala horreeyaan. Tani waxay ka dhigan tahay inay fikrad aad u wanaagsan tahay in sidan loo dhigo si loo ilaaliyo caqliga muuqaalka wax badan oo la jaan qaadaya shaqadooda.
Si aan hadda u siino nidaamka oo dhan waxaan u adeegsan doonnaa, sida ku xusan liiska walxaha lagama maarmaanka ah, xeedho taleefan oo leh isku xira microUSB kasta. Fikradda ah adeegsiga xeedho noocan ah asal ahaan waxay ka jawaabaysaa xaqiiqda ah inay aad u jaban yihiin oo ka sarreeyaan dhammaantood ay fududahay in la helo.. Fikrad kale oo ka duwan ayaa ah in la awood u yeesho xakamaynta ilaalada iyada oo la adeegsanayo baytariyada, in kasta oo waqtigan la joogo ay ugu fiicnaan karto in la isticmaalo beddelaad beddeliye ah oo hadda socota si loo hago hadda maaddaama dareeraha sawirka faraha uu inta badan cuno hadda iyo, quudinta nidaamka oo dhan batariyo batrool ahaan waa inaad ku bedeshaa maalin kasta.
Tallaabada 2: Koodh siinta iyo ku shaqeynta kontoroolayaasha
Waqtigan xaadirka ah gaar ahaan waxaan kuu sheegayaa taas labadaba koodhka ay fulinayaan ATMega328p iyo ATTiny85 labadaba waa la qoray oo la soo ururiyey Arduino IDE. Xaaladdan gaarka ah waa inaan ku fulinno faylka garagefinger.ino ee ATMega328p iyo feylka yar -_switch.ino ee ATTiny85. Dhinaca kale, NokiaLCD.cpp iyo NokiaLCD.h maktabadaha waa laba maktabadood oo loogu talagalay shaashadda LCD, kuwan waxaa laga soo uruuriyay tusaalooyin laga soo qaaday goobta Arduino iyo, sida ku dhow dhammaan maktabadaha, waa in lagu dhejiyaa galka 'maktabadaha'Arduino IDE-kaaga si aad u hesho. Galkani badanaa wuxuu ku yaalaa xididka halka aad IDE rakibtay, Windiows badiyaa waa Maktabadaha "% HOMEPATH" \_ Dukumentiyo \_ Arduino \_. Waxaan kaaga tagayaa faylasha soo dejinta wax ka hooseeya xariiqyadan:
Intaas waxaa sii dheer waxaad sidoo kale u baahan doontaa maktabadaha si iskaanka sawirka faraha uu u shaqeyn karo. Waqtigan xaadirka ah waa in maskaxda lagu hayaa nasiib daro Maktabadaha ku xiran goobta SparkFun ma shaqeyn doonaan maadaama loo sameeyay qaabka GT-511C3, aad uga qaalisan, oo aan loogu talagalin nooca aan adeegsanayno, laga yaabee wax aad u adag in la helo laakiin aad uga jaban. Maktabadaha shaqeeya ee GT-511C1R waxaa laga heli karaa github.
Haddii ka dib markaad soo degsato dhammaan faylasha oo aad eegto nambarka aad rabto in amni badan la siiyo nidaamka Waxaan kugu dhiirigelinayaa, tusaale ahaan, inaad hesho oo aad beddesho dhammaan axarig xarigereygaaga sirta ah. Faahfaahin kale oo aad u xiiso badan oo kaa caawin karta in nidaamkaagu noqdo mid ammaan ah ayaa beddeleysa buf variable ka faylka yar_switch.ino si ay dherer ahaan ula mid tahay lambarka sirta ah ee aad rabto inaad isticmaasho
Beddeli karo xad dhaaf, oo lagu qeexay faylka garagefinger.ino, wuxuu leeyahay matalaad 8-bit ah oo ah isku xigxiga saxaafadda badhanka kore / hoos taas ayaa loo isticmaali karaa in lagu furo albaabka garaashkaaga oo faraha lagusoo qaado nidaamka iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo faraha. Tani waxay waxtar leedahay markii ugu horreysay ee qalabka la isticmaalo iyadoo xusuusta iskaanku madhan tahay. Waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay in la beddelo qiimahan bilowga ah.
Tallaabada 3: Waxaan soo ururinaynaa mashruuca oo dhan
Markaan tijaabino mashruuca oo dhan, waxaa la joogaa waqtigii shirkii ugu dambeeyay. Tan awgeed waa inaan ku dhejino dhammaan guddiga xakamaynta gudaha sanduuqa biyaha. Sida aad ku arki karto sawirrada, si aan qofna u heli karin xakamaynta, marka lagu daro sanduuqa biyuhu xiraan, sanduuqa looxa ayaa loo isticmaalay kaas oo aan ku rakibeyno kaliya shaashadda LCD iyo badhannada marin-u-helka, inta ka hartay nidaamka ayaa noqon doona lagu rakibay gudaha sanduuqan.
Sanduuqan waa in lagu dhejiyaa banaanka gurigaaga oo si toos ah loogu xiraa sanduuqa aan ku dhejin doono ATTiny. Halkaan, waxaan ku xasuusin doonaa inaad ATTiny tahay inaad ku xirto fiilooyin si aad ula xiriirto calaamadaha mootada furaysa albaabka garaashkaaga. Xaaladdayda aniga way ii fududahay tan iyo gudaha garaashka laftiisa waxaan ku lahaa badhanka riixida darbiga oo qabatay isla shaqadan.
Tallaabada 4. Adeegsiga nidaamka
Marka aan nidaamka oo dhan rakibno, waa inaan riixnaa mid kasta oo ka mid ah saddexda badhan si labadaba shaashadda LCD iyo sawir-qaadaha faraha. Halkaa marka ay marayso, qalabku wuu sugaa ilaa aad far ka saarto qalabka iskaanka ah. Haddii farta aad ku dhejisey iskaanku la aqoonsado, albaabku wuu furmayaa oo menu ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda si loo furo / loo xiro albaabka mar kale, ku dar / tirtir faraha, beddel dhalaalka shaashadda ... Qalabka wuxuu daminayaa ilaa 8 ilbidhiqsi kadib furaha ugu dambeeya ee la riixay. Si aad u bedesho muddada waqtiga sugitaanka, waa inaad wax ka beddeshaa shaqada sugidBorton faylka garagefinger.ino.
Sidii aan ku soo sheegnay tuducyadii hore, waxaad isticmaali kartaa isku xigxiga isdhaafsiga adoo adeegsanaya korka / hoos udubka oo ay ku xigto 'OK'inaad marin u hesho nidaamka. Tani waa mid waxtar leh marka ugu horaysa ee aad hawl galisid aaladda maadaama, waqtigan xaadirka ah, kumbuyuutar-qaadaha uusan ku yeelan doonin faro-xusuustiisa. Tixraaca hore waxaa bixiya matalaadda laba-geesoodka ah ee 8-ka ah ee lambarka ku kaydsan doorsoomaha dhaafidCode faylka garagefinger.ino halkaasoo '1' uu matalayo badhanka 'kor' iyo '0' oo uu matalayo badhanka 'hoos'.
Hal qodob oo maskaxda lagu hayo ayaa ah, haddii ay dhacdo inaad beddesho taxaddarka xad-dhaafka ah oo aad hadhow illowdo adigoon faraha ku darin aaladda, si wax ku ool ah ayaa loo xirayaa waana inaad dib-u-eegis ku sameysaa ATMega328p oo aad ku qasabtaa inuu EEPROM masixi masixi aaladda.
Más información: tilmaamo
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Samee quful elektiroonig ah oo aad ku furi karto albaabka garaashka farahaaga awgiis
Sida loo sameeyo robot: 3 ikhtiyaar oo kala duwan
Arduino Yún, oo ah guddi si xorriyad leh ugu soo gala Internetka Waxyaabaha